ဒီနှစ်ရန်ကုန်မှာ စတော်ဗယ်ရီသိပ်ပေါတယ် ဈေးလဲမဆိုးဘူး အလုံးလေးတွေပိုသန့်လာတယ် ...။ ခါတိုင်းနှစ်တွေလို ၀ါးခြင်းထဲဖက်ခုပြီး အပုပ်တွေအောက်ခံရောင်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုံးသန့်ချည်းထည့်ရောင်းတော့ ဈေးကြီးလဲ စားသုံးသူက အားရကျေနပ်တယ် တန်တယ်ထင်ပြီး ၀ယ်ကြတာပဲမဟုတ်လား...။ ခါတိုင်း ပေါ်ခါစဆို တခြင်းထောင့်ငါးရာလောက်ရှိတယ် ခုတစ်ခြင်းကို ရှစ်ရာတစ်ထောင်အဲလောက်ပဲ အလုံးလေးတွေက ပိစိကွေးတွေမဟုတ်တော့ အလုံးသန့်သန့်ကြီးကြီးတွေ ချိုလည်းအားကြီးချိုတယ်...။ အသီးကမာမာကြီးမဟုတ်ဘူး ပျော့တယ် သဲစင်အောင်ရေသေချာဆေးစစ်ပြီး လက်ဖျော်မယ်ဆို ဓါးနဲ့လိုသလိုလှီးပြီး သကြား ဒိန်ချဉ်ရောပြီး ခပ်ပစ်ပစ် ဖျော်သောက်ပါလေ..။ နှစ်ခြင်းဆို လူငါးယောက်စာရတယ်...။ သို့မဟုတ်လည်း ဒီတိုင်းလေး ရေခဲသေတ္တာထဲ အလုံပိတ်ဗူးလေးနဲ့အအေးခံပြီး သကြားလေးနဲ့တို့စားစား ဒီတိုင်းလေးပဲကိုက်စားစားကောင်ပါ၏။
ကိတ်မုန့်ကို ပိတ်ရက်မှာ အားရင်အားသလို စမ်းလုပ်ကြည့်နေတယ်...။ ဒီတစ်မျိုးက ထောပတ်သီးကိတ် ဘိုလိုတော့ Avocado pound cake လို့ခေါ်တာပဲ...။ ထောပတ်နဲ့နို့ကိုဖျော်စက်နဲ့မွှေပြီးသပ်သပ်ထား သကြား ထောပတ် ဂျုံ ပြောင်းဂျုံမှုန့် မုန်ဖုတ်ဆိုဒါ စတာတွေချင်ထားလိုက်တယ်..။ ထောပတ်နဲ့သကြား သစ်ခွအရသာတို့ကို ခရင်မ်ဖြစ်တဲ့အထိ စက်နဲ့မွှေ့ ပြီးတာနဲ့ ကြက်ဥကိုတစ်ကြိမ်တစ်လုံးဆီထည့်မွှေမယ် သမသွားမှ ကြိတ်ထားတဲ့ထောပတ်သီးနဲ့နို့ထည့်မယ် သေချာသမအောင်မွှေပြီးရင် ဇကာစစ်ထားတဲ့ဆား ဂျုံနဲ့အမှုန့်တွေအားလုံးထည့်ပြီး အနှေးနှုန်းနဲ့မွှေပေးနေမယ်...။ မုန့်ဖုတ်မယ့်ခွက်ထဲကိုထည့်ပြီး 180 ကြိုတင်အပူပေးထားတဲ့ မုန့်ဖုတ်ဖိုထဲ 45 မိနစ်ဖုတ်မယ်...။ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ထိုးစမ်းကြည့်ပြီး မညစ်ပေဘဲပြန်ထွက်လာရင် ရပါပြီရှင်...။
*makesaloaf pan Flesh of 1 Avocado 50ml milk 125g butter, softened 150g sugar 1/2tsp vanilla extra2eggs 200g cake flour 40g Polenta (fine corn meal) 1/2tsp baking powder 1/2tsp baking soda 1/4tsp salt Method 1. Blend avocado flesh together with milk, set aside. 2. Beat butter, sugar and vanilla until light and creamy. 3. Add in eggs one atatime, beating well after each addition. 4. Put in avocado milk mixture, combine well. 5. Add in flour, Polenta, baking powder, baking soda and salt, mix well. 6. Bake inapre-heated oven at 180c for 45 minutes or until done when tested withaskewer.
အိမ်နားချင်းကအစ်မတွေဆီသွားတော့ သူတို့အိမ်မှာ ငှက်ပျောချဉ်တစ်ခိုင်ကြီးတွေ့တာနဲ့ တောင်းခဲ့တာ ဆယ်လုံးလောက်ဖြုတ်ခဲ့တယ် သူတို့က တခိုင်ဖြတ်ယူသွားတဲ့...။ အဲငှက်ပျောချဉ်ကိုအခွံခွာ အဖုံးလုံတဲ့ ဗူးထဲထည့်ပြီး ခဲခန်းထဲခဲထားလိုက်တယ်...။ အမေက ဒိန်ချဉ်ဖျော်ဖို့စတော်ဗယ်ရီကို သကြားနဲ့နှပ်ထားတာကို နဲနဲယူပြီး သူ့လဲခဲထားလိုက်တယ်...။ တစ်ညသိပ်ထား လိုက်တယ်ပေါ့...။ နောက်နေ့ကျမှ ခဲထားတဲ့ ငှက်ပျောခုနှစ်လုံး စတော်ဗယ်ရီလက်တဆုပ်စာနဲ့ သကြားခုနှစ်ဇွန်း နွားနို့ 50ml ရောပြီးဖျော်စက်ထဲကြိတ်လိုက်တယ်...။ ပုံထဲကအတိုင်းပစ်ပစ်လေးရတယ် အဲဒါကို ခွက်ထဲထည့်ပိတ် ပြန်ခဲထားနောက်တစ်ညပေါ့...။ ညမသိပ်ချင်လဲ ငါးနာရီခဲပြီးရင် စားလို့ရပါပြီ။
Freezer ထဲက သန့်ရှင်းလတ်ဆတ် လည်ချောင်းနာရမှာလည်းမပူရတဲ့ အိမ်လုပ်ငှက်ပျောစတော်ရေခဲမုန့်လေးကို ကြိုက်ရာပန်းကန်ခွက်ယောက်ထဲထည့်ပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ
ဒါက စတော်ဗယ်ရီချည်းလုပ်ထားတဲ့ ရေခဲမုန့်
Posted by coral nyo at 01:59
Labels: simply coral's kitchen(သရေစာများ), simply coral's kitchen(အချိုပွဲများ)